🥇 ▷ Sony waxay xaqiijineysaa inay leedahay xuquuqda Sunset Overdrive ✅
Sony waxay xaqiijineysaa inay leedahay xuquuqda Sunset Overdrive
Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah waxay noqon doontaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Sunset Overdrive, laga yaabee inay tahay mid noloshu tahay ama sagootin, laakiin waxaan rabnaa inaan kuu soo qaadanno bayaankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Sony ka dib markii ay qaateen Ciyaaraha Insomniac, taasoo ahayd dharbaaxo ku noqotay taageerayaasha Sunset Overdrive oo iyagu ahaa adoo sugaya in qayb labaad ay imaaneyso oo waligeed waligeed xoogsan doonin. Ugu yaraan Xbox One.
Sida hadalka loo dhigayo, noloshu waxay kudhamaatay wax badan oo dad aad u yar ayaa u maleyn jiray in mid ka mid ah IPs-ka cusub ee gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay ee ‘Xbox One’, maadaama ay ahayd Sunset Overdrive uu ku dhammaaday xaaladdan, isagoo ay iska leeyihiin shirkadda Microsoft. In kasta oo dhinaca kale, wax la mid ah ayaa sidoo kale ku dhacay Hellblade iyo Ninja Theory, kuwaas oo bilaabay inay ka go’doomaan PS4. Maanta, mareegaha Gudaha-games.jp (via PushSquare), waxaan ognahay in Yoshida laftiisa uu taas xaqiijiyey Dhamaan ciyaaraha oo ay horey u daabacday Insomniac hada waxaa iska leh shirkadda Sony.
Kubaddu waxay saaran tahay saqafka Sony oo ay ku jirto Sunset Overdrive
Sida uu sheegay maalintiisii Shawn lawden, hadda ma aysan diiradda saareynin Sunset Overdrive mana galaan qorshahooda si ay wax uga qabtaan IP-ga, laakiin garan mayno khilaafaadka sababi kara in PS4 lagu bilaabo ciyaarta iyo xitaa haddii ay suurta gal noqon karto, maadaama waxaa ka soo baxay dhowr bilood oo keliya on PC, tallaabada ay ku aaddan Sony console noqon lahayd arrin kale.
Sida laga soo xigtay hadaladii Yoshida ee maanta, jawaabtiisu waxay ahayd maxaa yeelay waxaa jiray dad aan aqoonin xaaladda dhabta ah ee Sunset Overdrive IP, sida isha asalka ahi ku muujisay wareysiga. Waxaan u maleynay inay run ahaantii ku dhacday Sony, laakiin ganacsiga maanta, waxaan horeyba u ognahay in dhammaan xuquuqdani, IP-yada iyo daabacayaasha ay sii wadaan inay muujiyaan hadh ka badan nalalka marka ay timaado inay si cad ula socdaan ciyaartoyda.